နောက်တဖန်ဖူကူရှီးမားရေပိုးမွှားလျော့ကျစေသည့်စနစ်ကဆင်း - သတင်း Rule
အင်္ဂလိပ်: ဇွန်လရက်နေ့တွင်တိုကျိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကမကထဖူကူရှီးမားငါနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံခရီးစဉ်မှာယူဓါတ်ပုံများတစ်ခုမှာ 23, 1999. ဂျပန်: ဇွန်လ 1999 ဖူကူရှီးမားအတွင်းပထမဆုံးနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံအတွက်ရာအရပျကိုယူသောတိုကျိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီ-sponsored ခရီးစဉ်မှာ (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဂျပန်၏အော်ပရေတာချိ ဖူကူရှီးမား နျူကလီးယားစက်ရုံ အင်္ဂါနေ့ကဓါတ်ရောင်ခြည်-စှနျးကိုရေဆေးကြောသန့်စင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ key ကိုပိုးမွှားလျော့ကျစေသည့်စနစ်ပိတ်ပစ်ခဲ့ဟုဆိုသည်, ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းပြန် လာ. မယ့်နာရီပြီးနောက်.
တိုကျိုလျှပ်စစ်စွမ်းအား (TEPCO) ၎င်း၏အဆင့်မြင့်အရည်ထုတ်ယူခြင်း System ကိုပိတ်ထား (အဲလ်ပ်တောင်တန်း) အလုပျသမားယိုစိမ့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် “seeping” တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းတစ်အကြံပေးအဖွဲ့မှ.
အကြောင်းရှစ်လီတာ (2.1 ဂါလန်) ထင်းရေထဲကပေါက်ကြားရန်ယုံကြည်, ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်. သူကရေကိုဆယ်ယူခဲ့အဖြစ်မရှိချက်ချင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်ရှိ၏ဆက်ပြောသည်.
အဆိုပါရပ်ဆိုင်းမှုတိုက်ပွဲဝင်အော်ပရေတာစနစ်၌နှစျသုံးလိုင်းပေါ်ပြန် switched ပဲခြောက်နာရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏, သောဂျပန်ရဲ့ကြီးကျယ်သောအားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဓါတ်ပေါင်းဖိုအအေးအသုံးပြုဓါတ်ရောင်ခြည်-စှနျးကိုရေသန့်ရှင်းရေး 2011 ငလျင်-ဆူနာမီဘေးအန္တရာယ်.
TEPCO ဟာအပြစ်အနာအဆာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်တပြင်လုံးကိုစနစ်ကနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပိတ်ပစ်ခဲ့. ရုံးတင်စစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတင်ခဲ့ကတည်းကကုမ္ပဏီဆက်ကြောင်းတစ်ခုစီးရီးကျော် system ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ထားခဲ့သည်.
TEPCO ကြီးမားတဲ့ကိုင်တွယ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည် — နှင့်ကြီးထွားလာ — ငလျင်-ဆူနာမီအောက်ပါဖူကူရှီးမားမှာညစ်ညမ်းမှုကိုရေထဲမှာ volume, အဆိုးဆုံးအက်တမ်တစ်ခုမျိုးဆက်အတွက်အကျပ်အတည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အချို့သောကွာလောကထဲကလူတော်တော်များများဖြစ်ပွားခဲ့ရာသော 18,000 သားကောင်များ.
ဧရာမလှိုင်းတံပိုးစက်ရုံသို့ပျက်ကျခဲ့, ညိုအုန်းမြင့်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအရည်ပျော်ကျခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲမှု. ထိုချိုးဆိုက်ဖွင့်ပျော်စေဆယ်စုနှစ်ယူရန်မျှော်လင့်နေသည်.
အကြောင်းရှိပါတယ် 436,000 အကြောင်းအတွက် site ကိုမှာသိမ်းဆည်းထားညစ်ညမ်းမှုကိုရေကုဗမီတာ 1,200 ရည်ရွယ်ချက်-built င့်ကားများ.
အများစုကကျွမ်းကျင်သူများကတစ်ချိန်ချိန်ရေအများဆုံးအန္တရာယ်ရှိသောညစ်ညမ်းမှု၏ scrubbed ခံရပြီးနောက်ပင်လယ်ထဲသို့လွှတ်ပေးခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုဆိုရ.
ဤဆောင်ပါး, နောက်တဖန်ဖူကူရှီးမားရေပိုးမွှားလျော့ကျစေသည့်စနစ်ကဆင်း, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
20731	0 ဖူကူရှီးမား, ဂျပန်, နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံ, တိုကျိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီ
← ဖြတ်ဖို့တော်ဝင်မေးလ် 1,600 အလုပ်အကိုင် နောက်ကျောပထမဦးဆုံးတရားရေးလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်အဖြစ်အပေါ် MH370 ရှာဖွေရေး →